Go'aanadii Kusaabsanaa Dhismaha iyo Goobta Jaamacada. - Cakaara News
Go'aanadii Kusaabsanaa Dhismaha iyo Goobta Jaamacada.
Jigjiga(CN) khamiis.April.09.2015. Goaanka jaamacada labaad ee deegaanka usoo hoyatay ee ah goobta laga dhisayo iyo magaca ayaa waxaa iska leh deegaanka waxaana u xilsaarnaa guddi uu chairman ka ahaa afhayeenka bàarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq. Iyadoo ay dhismaha jaamadan qaran ay kamid tahay xuquuqaha tastuuriga ah ee deegaanku ugu leeyahay dawlada dhexe inay kadaboosho baahiyaha waawayn.
Hadaba Guddiga oo kaduulayay arimo farabadan ayaa go'aamiyay in laga dhigo jaamacadan labaad ee DDSI laga hirgaliyao magaalada Qabridahar ee xarunta gobolka Qoraxey maadaama ay tahay meel badhtan u ah deegaanka (center) iyo istaraatiijiyado kala duwan oo looga duulay.
Sidoo kale jaamacadan ayaa loo bixin doonaa magaca Jaamacada Qabridahar (Kebridahar University) maadaama inta badan boqolkiiba 95 loogu magac dro jaamacadaha goobta ama magaalada laga dhisayo.
Go'aankan ayaa kadib waxaa lasoo hordhigay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar. Sidoo kale waxaa go'aankan soo dhaweeyay madaxwayne kuxigeenka DDSi mudane Mowliid Haayir oo ah wasiirka waxbarashada ee DDSI.
Jaamacadan oo ay maanta ay dhagaxdjigyaan madaxda sare ee dawlada federaalka iyo madaxwaynaha DDSI ayaa kadhici doontaa munaasibada xaflada dhagax dhiga.
Jaamacadan Qabridahar ayaa kuyeelan doonta magaalada Godey Compus wayn iyadoo ay jaamacada Jigjigana ay kuyeelan doonta magaalada Dhagaxbuur.
Jaamacadan Qabridahar ayaa waxay kamid tahay mashaariicaha waawayn ee GTP2 ee ay horay odoyaasha degeaanka iyo xukuumada DDSI uga codsadeen dawlada Federaalka oo ay xaquuqdooda tastuuri ugu leeyihiin waxaana kamida mashaariicaas Warshada Sonkorta Godey, Biyo xidheenka Xamaro, Wadada Godey ilaa Feer feer, iyo mashaariico kale.
Faah faahinta dib ayaan indin kala soo socodsiin doonaa.